e today, Author at
Author:etoday
महिलाहरुमा ४० लागेपछि यस कारण जाग्छ फेरी बैस !
३ घण्टा अगाडिetoday
बुडापाकाहरु को एउटा पुरानो भनाई गाउघरमा सुनिरहनु भएकै छ होला नि, चालिसे लागेछ बैस जागेछ । यो उखान पहिलेको बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन् । बुडापाकाका अनुसार जीवनमा पहिलो पटक १६ वर्ष र दोस्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे । हाम्रो समाजमा कहिकतै महिलाहरु ४० वर्षपछि अर्को स’म्बन्धमा रहेको घटनाहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । छोरा बुहारी सम्हालेर बस्ने बेलामा अर्को पाई खोज्दै हिडेको पनि देख्नु भएको छ होला । विवाह पश्चात मानिसहरु वैदेशिक रोजगारी पश्चिमा रहनसहन आ’र्थिक अभाब रोगहरुको चपेटा जस्ता विभिन्न कारणहरुले श्रीमान श्रीमती एक…
घरमा एक्लै हुँदा केटीहरुले गर्छन् यस्तो हर्कत, जुन सुन्दै चकित परिन्छ
२ दिन अगाडिetoday
हामी घरमा अथवा कोठामा एक्लै भयौं भने के गर्छौं रु टिभी हेर्छौं, पार्टी गर्छौं अथवा मोजमस्तीका अन्य केही विकल्पहरु । तर केटीहरु घरमा एक्लै हुँदा के गर्छन् होला ? एक्लै भएको मौकामा उनीहरु परिवारका सामु हेर्न असहज हुने टिभी शोहरु हेर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता छन् केही केटीका बारे रोचक तथ्यहरु जब घरका सदस्यहरु बाहिर जान्छन् या एक्लै हुन्छन् उनीहरु आफूलाई मिनी फेशनका रुपमा लिन्छन् । आफूले पछिल्लो समय किनेका नयाँ–नयाँ कपडाहरु लगाउँछन् । त्यो उनीहरुको परीक्षण हो । एक्लै भएको मौकामा उनीहरु परिवारका सामु हेर्न असहज…
कति वर्षको उमेरमा, कुन समयमा महिलालाई बढी ‘यौ’,न चाहाना हुन्छ ?
हाम्रो समाजमा से८ क्सका बारेमा खुलेर कुरा गर्ने चलन कमै छ । झन से८ क्स कसरी भन्ने बारेमा जान्ने उत्सुकता भएपनि लाज हुन्छ भनेर चुप लाग्छन् । तर, सुखद जीवनका लागि सुखद से८ क्स लाइफ हुनु जरुरी हुन्छ । आम जीवनमा से८ क्स आधारभुत आवश्यकता नै हो । जसरी सुत्नु, खानु र दैनिक कार्य गर्नुपर्छ । त्यसैगरी से८ क्स पनि मानव जीवनमा आवश्यक हुन्छ । हाम्रो समाजमा अधिकांश यस्ता परिवार छन् । जसको वैवाहिक जीवन यी कारणहरुले राम्रो बन्न सकेको छैन् । किनकी उनीहरुको से८ क्स जीवनमा खुलेर गर्न सक्दैनन्…
उ,त्ते,जक भूमिकापछि किनारा लागेका हिरोइनहरु !
३ दिन अगाडि ३ दिन अगाडिetoday
“अंग प्रदर्शन गरेर चर्चा कमाउन खोज्न लालायित अधिकांश हिरोइन पलायन भएका छन्। फिल्मवृत्तमा बाँकी रहेका त्यस्ता केही हिरोइनको पनि ‘ भाउ’ छैन। भल्गर र ग्ल्यामरबीच भेद खुट्याउन नसक्ने हिरोइन ढिला- चाँडो पलायन हुन्छन् नै।” फिल्म दुलहीबाट सोझी युवतीको भूमिकामा फिल्मी यात्रा सुरु गरेकी हिरोइन हुन्, सुमिना घिमिरे। तर, यो फिल्मले उनलाई पर्याप्त चर्चा दिलाएन। रातारात हिट हुने लोभमा अंग प्रदर्शनको बाटो रोजिन्। स्टार, लभ फरेभर, नाइन ओ क्लक, अप्रिल फुल लगायत फिल्ममा छोटा लुगा लगाएर कामुक अवतारमा देखिने प्रयास गरिन्। दुर्भाग्य, यी फिल्मले नाम होइन, बदनामी दिलायो। गतिला ब्यानरले पत्याएनन्।…
३ दिन अगाडिetoday
दुई छोराकी आमा भर्खर जुँगाको रेखी बसेको तन्नेरीसँग चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्।यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ रु अर्थात्त्र हो तरु श्रीमान् विदेशमा हुने, श्रीमान्को माया नपाउने, असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ। उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्। उनीहरू ‘आन्टी’हरूसँग फ’स्नुका कारण अनेक छन्। कसैका लागि यो एकप्रकारको रोजगारी हो, कसैका लागि आर्थिक संकट हल गर्ने उपाय। अनि, कसैका लागि परिपक्व महिलासँग देहयात्राको आनन्द।यस्तो सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्ति किन बढ्दै छ समाजमारु अनि यसका जटिलता के–के हुन्रु हामिले केलाउन सक्नु पर्छ ।lअरू…
१ महिना अगाडिetoday
त्रिशाकर मधु भोजपुरी फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री हुन् । यतिबेला उनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छाएकी छन् । चर्चाको बिषय उनको एक एसएमएस बनेको छ । जसमा उनी केटाका साथमा देखिएकी छन् । एमएमएसमा भाइरल भइरहेको छ । भिडियो सार्वजनिक गर्ने ब्यक्ति प्रति उनी आक्रोशित बनेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘भगवानले सबै देख्छन् । मलाई गाली खुवाउन मेरो प्राइभेट भिडियो भाइरल गर्दिए । उनले भिडियो सार्वजनिक गर्नेलाई प्रश्न गरेकी छन्, ‘यदि तपाइँको बहिनीसँग कसैले विवाह गरेर अर्काे दिन सुहागरातको भिडियो भाइरल गर्दियो भने राम्रो लाग्छ हो ? ।’ ‘बिहारमा…
एजेन्सी । कुनै कुनै समाचारहरु बिश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो पनि होला त भन्ने लाग्छ । तर ती समाचारहरु सत्य हुन्छन् । यस्तै एउटा घ,टना भारतको उत्तर प्रदेश प्रहरीकहाँ आइपुगेको छ । यो घट’नालाई कसरी स’माधान गर्ने भनेर प्रहरी समेत छक्क परिरहेको छ । वाराणसी नजिकै चन्दौलीमा एक स्थानीय महिला प्रहरीको महिला सहायता डेस्कमा आइपुगेकी थिइन् । तर उनले जुन कुरा उठाईन् त्यसले त्यहाँ उपस्थित अधिकारीहरू अच’म्मित परेका छन् । सम्झाई बझाई गरेर ती महिलालाई पछि घर फिर्ता पठाइएको छ । तर उनले दिएको उ’जुरीले सबैलाई चकित पारेको हो ।…
आज नागपञ्चमी : यसरि गर्नुहोस् पुजा,बर्षभरी मिल्नेछ चमत्कारिक लाभ !
नागपञ्चमी पर्वलाई हिन्दु धर्म मान्नेहरुले विशेष महत्वको साथ लिने गर्दछन । यस दिन नाग देवताको पुजा गर्नाले सबै खालका दुःख र रोग ब्यथाहरु नष्ट भएर जान्छन भन्ने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ । नागपंचमी आफैंमा एक महत्वपुर्ण पर्व हो यसको उपासना र पुजाले मानिसले शान्ति समृद्धिजस्ता कुराहरु सहजै प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास रही आएको छ । यो पटकको नागपंचमी सन १९८१ पछिको सबैभन्दा महत्वपुर्ण बन्ने ज्वतिषहरुले बताएका छन । १३ अगस्ट अर्थात भोलि बुधवार हस्त नक्षत्र साध्य योग एवम कन्या राशिमा चन्द्रमा रहने भएको छ । सूर्य, राहु, बुधको कर्कट…
वास्तुशास्त्रLeaveacomment
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल श्रावण २९ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२१ अगस्त १३ तारीख श्रावण शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथी हस्ता नक्षत्र पश्चात चित्रा नक्षत्र साध्य योग कौलव करण चन्द्रमा कन्या राशिमा आनन्दादि योगमा अमृत योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु नागपञ्चमी,कल्कीजयन्ती,ल।पु।दानघाट धापाखेल,नक्साल,नागपोखरी टौदहमा आदिस्थानमा मेला थारूहरूको गुरिया पर्व (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले कार्य सम्पादनमा सजग रहनु पर्ने समय रहेकोछ । पारीवारका सदस्यहरु बाट टाढाँ भएको महसुस हुनेछ । बाणीका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्नेछ…
१ महिना अगाडि १ महिना अगाडिetoday
बैसाख जेठको गर्र्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो । म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएं । एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ । पढ्नको लागी खोलेको किताब खुल्लै मेरो पेटमाथी घोप्टो परेर नाईटोमा मुख जोतिरहेको थियो । म एउटा हातले म्याक्सी माथी बाटै…